Maqaallada ku saabsan Fibromyalgia
Fibromyalgia waa cillad xanuun oo joogto ah oo caadi ahaan bixisa aasaaska dhowr calaamadood oo kala duwan iyo calaamado caafimaad. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan qodobbada kala duwan ee aan ka qornay cilladda xanuunka daba dheeraatay ee fibromyalgia - mana aha ugu yaraan nooca daaweynta iyo is-cabbirka loo heli karo baaritaankaan.
Fibromyalgia waxaa sidoo kale loo yaqaanaa rheumatism unug jilicsan. Xaaladda waxaa ka mid noqon kara astaamo ay ka mid yihiin xanuun daba-dheer murqaha iyo kala-goysyada, daalka iyo niyad-jabka.
7 Talooyin oo Loogu Adkaado Fibromyalgia
13 / 06 / 2017 /1 Comment/i fibromyalgi, Xanuun joogto ah/av waxyeelladayda
Garaac fibromyalgia oo aad ku sii socotaa derbiga? Aynu ku caawinno
Fibromyalgia waxay sababi kartaa caqabado waaweyn nolol maalmeedka. Runtii aad ayay u adagtahay in la dareemo xanuunka daba dheeraada. Halkan waxaa ah 7 tabo iyo qiyaaso kaa caawin kara inaad nafiso calaamadaha caadiga ah ee fibromyalgia oo ka dhigi kara maalintaada mid sahlan.
- Si wada jir ah oo loogu talagalay Fahamka Kordhinta Xanuunnada Xanuunka Daba-dheeraada
Qaar badan oo ka mid ah kuwa qaba xanuunka joogtada ah waxay dareemaan inaan la maqal ama aan si dhab ah loo qaadan. Taasi lama ogolaan karo inay dhacdo. Waxaan garab istaageynaa kuwa ay saameeyeen xanuunka dabadheeraad waxaanan si naxariis leh ku weydiineynaa inaad la wadaagto maqaalkan baraha bulshada si loo kordhiyo fahamka xanuunkan. Mahadsanidiin horraan. Xor baad u tahay inaad nagu soo raacdo Facebook og YouTube.
- Waaxyadayada edbinta ee Vondtklinikkene ee Oslo (Lambertseteriyo Viken (Eidsvoll Sound og Råholt) Dhakhaatiirteenu waxay leeyihiin karti-xirfadeed sare oo gaar ah oo ku saabsan qiimeynta, daaweynta iyo tababarka baxnaaninta ee xanuunka daba-dheeraada. Anaga, mar walba waxaa laguu qaadan doonaa si dhab ah. Guji linksyada ama iyada si aad wax badan uga akhrido waaxyadayada.
Hoos u deg si aad u aragto laba fiidiyow oo jimicsi oo weyn oo leh jimicsiyo iyo farsamooyin nasasho kuwaas oo ku caawin kara fibromyalgia.
Ku dhaco? Ku biir kooxda Facebook «Rheumatism - Norway: Cilmi baaris iyo warar»Wixii ku saabsan cusbooneysiinta ugu dambeysa ee ku saabsan baarista iyo qorista warbaahinta ee ku saabsan tan iyo xanuunnada kale ee laabatooyinka. Halkan, xubnuhu sidoo kale waxay ka heli karaan caawimaad iyo taageero - wakhti kasta oo maalinta ah - iyadoo la adeegsanayo isweydaarsiga khibradahooda iyo talooyinkooda.
1. Cadaadiska saar
Cadaadiska ayaa kicin kara oo sababi kara “kacsanaan” fibromyalgia.
Yaraynta diiqada nolol maalmeedka waxay u horseedi kartaa tayada nolosha oo soo hagaagtay iyo calaamado yar. Qaar ka mid ah siyaabaha lagu taliyey ee lagula tacaalayo walaaca waa yoga, miyir-qabka, acupressure, jimicsi iyo fekerid. Farsamooyinka neefsashada iyo garashada farsamooyinka noocan oo kale ah way caawin karaan.
- Waqti qaado si aad u nasato
Baro inaad naftaada u fududayso maalinta casriga ah ee dejisa heerar sare. Waxaan aad ugu talinaynaa fadhi nasasho maalinle ah derin acupressure (ku dhufo halkan si aad wax badan u akhrido - xidhiidhku wuxuu ka furmayaa daaqad cusub). Kala duwanaanshiyahani waxa kale oo uu leeyahay barkin qooreedka oo lagu daray taas oo sahlaysa in lagu shaqeeyo murqaha kacsan ee dhabarka sare iyo qoorta
Sidoo kale aqri: 7 Waxyaabaha Lagu yaqaan Kartidaas in ay sii xumaynayso Fibromyalgia
Guji xiriirinta kor ku xusan si aad u aqriso maqaalka.
2. Tababar si joogto ah loo habeeyay
Jimicsiga fibromyalgia wuu adkaan karaa.
Si kastaba ha ahaatee, noocyada jimicsiga qaarkood ayaa si fiican u shaqeyn kara - sida jimicsi joogto ah, jimicsi hooseeya, sida socodka ama jimicsiga barkada biyaha kulul ayaa ka mid ah daaweynta ugu fiican ee fibromyalgia.
Waxay kaa caawin kartaa yareynta xanuunka iyo adkaanta, iyo sidoo kale waxay ku siin kartaa dareenka kororka ee xakameynta ogaanshaha xanuunka dabadheer. La hadal dhakhtarkaaga, daaweeyahaaga jimicsiga, lafopractor ama dhakhtarkaaga si aad u ogaato nooca barnaamijka jimicsiga adiga kugu habboon - sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawino kanaalka Youtube-ka ama mid ka mid ah rugahayada edbinta ee kala duwan haddii aad rabto.
Fibromyalgia waxay keentaa xanuun daba-dheer iyo adkaanta murqaha jidhka iyo kala-goysyada. Halkan waxaa ah barnaamij jimicsi shan-jimicsi kaa caawin kara inaad dhabarkaaga, miskaha iyo miskahaaga dhaqdhaqaaqaan. Hoos guji si aad u aragto layliyada.
VIDEO - 7 Layli oo loogu talo galay Rheumatists:
Fiidiyowgu ma bilaabmin markii aad riixdid? Isku day cusboonaysiinta biraawsarkaaga ama si toos ah uga daaya kanaalkayaga YouTube. Sidoo kale xusuusnow inaad subscribe - gebi ahaanba bilaash ah - kanaalka hadaad rabto barnaamijyo tababar wanaagsan iyo jimicsi badan.
3. Qubeys Kulul
Ma ku faraxsan tahay inaad ku raaxaysato qubeyska kulul? Way kuu fiicnaan kartaa.
Ku seexashada qubeyska diiran waxay sababi kartaa muruqyada inay is dejiso oo xanuunka uu xoogaa dejiso saqafka xoogaa. Kuleylka noocaan ah wuxuu kor u qaadi karaa heerka endorphin ee jirka - kaas oo xannibaya calaamadaha xanuunka wuxuuna u horseedi karaa tayada hurdada oo hagaagto. Haddii kale waxaan ku talinaynaa isticmaalka xirmo kulayl dib loo isticmaali karo (eeg tusaalaha halkan - xiriirku wuxuu ka furmay daaqad cusub). Baakidhku waxa ay ku shaqaysaa iyada oo kululaysa ka dibna saaraysa muruqyo kacsan iyo xanuun.
4. Iska yaree kafeega
Ma jeceshahay koob kafee ah oo xooggan? Waxay nagu noqon kartaa caado xun oo leh fibro, nasiib daro.
Caffeine waa udiyaar udub dhexaad- taas oo macnaheedu yahay inay kicineyso wadnaha iyo habka neerfaha ee dhexe inay ku jiraan 'feejignaan sare'. Marka cilmi-baaristu muujisay in fibromyalgia aan ku leenahay fiilooyinka dareemayaasha firfircoon, waxaan ogaanay in tani aysan ahayn mid wanaagsan. Laakin ma qaadan doonno kafeega si buuxda - taasi waxay noqon doontaa si aad u xun. Balse isku day inaad xoogaa xilka ka degto.
Tani waxay sidoo kale horseedi kartaa tayada liidata ee hurdada iyo walwal. Sidaa daraadeed isku day inaad xadido qaadashada kafeeynka, maxaa yeelay kuwa qaba fibromyalgia horeyba waxay u leeyihiin nidaam dareemeyaal aad u firfircoon. Gaar ahaan waa muhiim inaad ka fogaato qaxwada iyo cabitaannada tamarta laga bilaabo galabta iyo wixii ka dambeeya. Waxaa laga yaabaa inaad isku dayi karto inaad u beddelatid ikhtiyaarrada burburay?
Sidoo kale aqri: Kuwani waa 7 Noocyada Kala Duwan ee Xanuunka Fibromyalgia
Waqti u gooni naftaada - maalin kasta
Waqtiga dhabta ahi wuxuu muhiim nooga noqon karaa fibromyalgia.
Fibromyalgia waxay nolosha ku adkeyn kartaa dhammaan caqabadaha kugu soo wajahan, haddaba iska hubi inaad waqti u qoondayso naftaada maalin kasta taasoo qayb ka ah is-daryeelkaaga. Ku raaxeyso hiwaayaddaada, dhageyso muusikada, isdeji - samee waxa kaa dhigaya inaad fiicnaato.
Waqti-u-shaqeysiga noocan oo kale ah wuxuu nolosha ka dhigi karaa mid isku dheellitiran, hoos u dhigo heerarka walaaca ee jirkaaga waxayna ku siin karaan tamar badan nolol maalmeedkaaga. Waxaa laga yaabaa saacad bil ah oo daaweynta jirka ah (tusaale ahaan, daaweynta jir ahaaneed, xanuunka loo yaqaan 'chiropractic casriga' ama acupuncture?) sidoo kale fikrad fiican ma noqon kartaa?
6. Ka hadal xanuunka
Xanuunkaaga ha joojin. Adiga kuguma fiicna.
Dad aad u badan oo qaba fibromyalgia ayaa taga oo xanuunka iska ilaaliya - ilaa ay ka sii soconayso oo shucuurta la wareegaan. Fibromyalgia wuxuu naftaada u keenaa walwal, laakiin sidoo kale kuwa hareerahaaga ah - sidaas darteed isgaarsiintu waa furaha.
Haddii aadan fayoobaan - markaas dheh. U sheeg inaad u baahan tahay inaad haysato wakhti firaaqo ah, qubays kulul ama wax la mid ah sababtoo ah hadda waa kiiska in fibromyalgia uu joogo meeshii ugu sarreysay. Qoyska iyo asxaabtuba waxay u baahan yihiin inay ogaadaan jiradaada iyo waxa ka sii dara. Aqoonta noocaas ah, waxay qayb ka noqon karaan xalka markaad u baahan tahay caawimaad.
7. Baro inaad tiraahdo MAYA
Fibromyalgia waxaa badanaa loo yaqaan 'cudurka aan la arki karin'.
Waxaa taas loogu yeeraa sababtoo ah way ku adkaan kartaa kuwa kugu xeeran si ay u arkaan in aad xanuunayso ama aad ku dhibtoonayso aamusnaanta. Halkan aad bay muhiim u tahay inaad barato inaad u samayso xuduud naftaada iyo waxaad u dulqaadan karto. Waa inaad barataa inaad tiraahdo MAYA markay dadku doonayaan qayb badan oo idinka mid ah shaqada iyo nolol maalmeedka - xitaa haddii ay ka hor imaaneyso shakhsiyaddaada waxtarka leh iyo qiyamkaaga asaasiga ah.
Waxaan ku boorinaynaa qof walba oo qaba cudurkaan inuu ku biiro kooxda Facebook «Rheumatism - Norway: Cilmi baaris iyo warar»- halkan waxaad uga hadli kartaa xaaladdaada waxaadna ka heli kartaa talo wanaagsan dadka isku fikirka ah.
Mar labaad, sidaas ayaan rabnaa å si fiican u waydii si aad ula wadaagto maqaalkan warbaahinta bulshada ama bartaada (xor u noqo inaad si toos ah ugu xirto maqaalka). Fahamka iyo xoojinta diiraddu waa tallaabada ugu horreysa ee loo qaado nolol maalmeedka wanaagsan kuwa qaba xanuun joogto ah.
Talooyin si looga caawiyo la dagaalanka fibromyalgia iyo cudurrada xanuunnada daba-dheer:
Xulashada A: Si toos ah ugu wadaag FB - Nuqul cinwaanka websaydhka oo ku dheji boggaaga facebook ama koox facebook ku habboon oo aad xubin ka tahay. Ama riix badhanka "SHARE" ee hoose si aad ugu sii wadaagto boostada facebook -gaaga.
Taabo taabashadaan si aad ula sii wadaagtid. Aad ayaan kuugu mahadnaqayaa qof kasta oo gacan ka geysta kor u qaadista fahamka xanuunnada dabadheeraad iyo fibromyalgia!
iyo sidoo kale xusuusnow inaad ka tagto qiimeynta xiddig haddii aad jeceshahay maqaalka:
Waxaan bixinaa qiimeyn casri ah, daaweyn iyo tababar xanuun dabadheeraad ah.
PAGE xiga: 5 Jimicsiyada dhaqdhaqaaqa ee loogu talagalay kuwa qaba Fibromyalgia
Guji masawirka ama isku xirka sare.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/7-TIPS-FOR-Å-HOLDE-UT-MED-FIBROMYALGI.jpg?media=1648573622 368 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2017-06-13 20:07:332022-03-22 16:15:267 Talooyin oo Loogu Adkaado Fibromyalgia